musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Kufamba-famba kuburikidza neSeychelles nhaka
Seychelles National Museum yeNhoroondo
Iyo Seychelles National Museum yeNhoroondo inotakura vashanyi makore mazana maviri nemakumi mairi munguva yakapfuura ichivapa kuravira kwezvitsuwa zvakapfuma zveCreole nhaka.
Iyo National Museum yeNhoroondo chiitiko chinonakidza chakazara nekoloni-dhizaini dhizaini, zvigadzirwa, uye maberere.
Galleries inoratidza tsika dzeCreole, ichiputika neushingi uye ine hunyanzvi hunyanzvi - kubva mumimhanzi nekutamba, kuimba nekugadzira, kune chikafu chinonaka.
Zviyeuchidzo zvakagadzirwa panguva yekuongorora musimamende zvinogona kuendeswa kumba sezviyeuchidzo mumhando dzechinyakare mamvemve dhongi, bhuku rengano, mabhegi, zvisikwa zvematanda, nezvimwe.
Mumwe haana kunyatso kufumura runako rweSeychelles Islands kudzamara mumwe aongorora midzi yezvitsuwa. Inowanikwa mukati memwoyo weVictoria, guta rekuenda, uye nhanho kubva paiye anozivikanwa Clock Tower, iyo National Museum yeNhoroondo inogadzira akawanda mabara ayo anorondedzera ngano dzekare kuburikidza neakasarudzika zvigadzirwa nemifananidzo.
Iyo National Museum yeNhoroondo inoshanda seyeuchidzo yezvakaitika kare, kwete chete nezviri mukati mayo asiwo neyakavakirwa-echinyakare dhizaini iyo inoratidza echinyakare kuvakwa kwe Secheres. Pakutanga yakavakwa neNew Oriental Bank kuti vashandise, iyo mamuseum yakavhura madhoo ayo mu1965 uye zvino yakagara mune yaimbove imba yeDare Repamusorosoro reSeychelles, mushure mekutama kubva kune iriko hofisi yaMeya weVictoria mu 1990.
Kukugamuchira iwe pamusuwo wemu museum ndiyo inofungidzirwa kuti ndiyo chidiki chidiki cheMambokadzi Victoria pasi rose kuguta diki rakatumidzwa zita rake paMambokadzi Victoria Jubilee Fountain yakavhurwa, panguva yekutonga kwamambo kwenguva refu, musi wa5. Ndira 1900 naLady Mary Jane Sweet-Escott, mudzimai waMutungamiri uye gavhuna wekutanga weBritain weSeychelles, Sir Ernest Bickham Sweet-Escott. Nhanho shoma kure kunopararira kwaPierre Poivre, maneja anofunga nezve Isle de France naIle Bourbon vane basa rekuunza sinamoni nezvinonhuwira kuzvitsuwa kuburikidza nekugadzwa kweJardin du Roi, kurudziro kuseri kweminda yemazuva ano yezita rimwe chete. kuEnfoncement, Anse Royale.
Yakapihwa basa rekuenzanisira nhoroondo yeSychelles uye kuwanikwa, kuchengetedzwa uye kuratidzwa kwezvakaitika zvechivanhu zvekufarira zvehunhu izvo zvinoratidzira tsika nemararamiro ehupenyu munguva dzakapfuura, miziyamu yakagadziridzwa muna2018 kusanganisira ekuratidzira edhijitari uye zvimwe zvigadzirwa uye maberere anovhara zvakafara yeiyo Seychelles nhoroondo inosanganisira hupfumi, zvematongerwo enyika, zviitiko zvakakosha uye tsika.
Iwo moyo weiyo Seychellois imba
Vane nzara nezve chikafu chavo chinonaka, vanhu veSeychellois vaive nematurusi chaiwo akavabatsira mukuendesa musanganiswa wekunaka kwezvinonhuwira uye zvitsva zvigadzirwa. Kudzoka mukati mezuva, kicheni yaive yakasarudzika dhizaini kubva kuimba hombe, yakavakwa kunyanya kudzivirira dzimba moto. Chaizvoizvo zvishandiso zvekicheni zveCreole senge dhaka uye pestle, enamel mugs uye mahwendefa, mufarinya grater uye iyo 'marmit', iyo yakakandwa simbi yekubikira poto inowanikwa mumisha yega yega, inogona kuonekwa ichiratidzwa. Chikamu chakakosha cheimba yeCreole, iyo kicheni inoratidzira miziyamu inobata zvigadzirwa izvo zvichiri kushandiswa mukicheni dzanhasi dzakatenderedza Seychelles.
Mufurati wevabati vehove vemo uye yavo yechinyakare yemapuranga pirogue, chikepe chidiki chekuredza, chinokuendesa iwe kumazuva uko vabati vehove vaizobuda mangwanani-ngwanani ehove nyowani. Kana iwe uine rombo rakanaka, uye nekukasira zvakakwana, unogona kuona ino yetsika tsika iwe paunotora mangwanani kufamba uchitevedza mahombekombe emahombekombe akadai saBeau Vallon. Pachiratidziro, unogona kuwana ruoko-rwakagadzirwa yemishenjere hove musungo inozivikanwa se kazye uye kunyange lansiv, conch shell, iyo vabati vehove vaishandisa kukwezva maSeychellois kubva mudzimba dzavo kuenda kumahombekombe kana kumusika kuti vatenge zvitsva zvezuva racho, tsika yakachengetedzwa ichiripo kusvikira nhasi.
Mushonga wezvakasikwa unoumba chikamu chenhaka mhenyu yeSeychellois. Kuve iri nyika diki yechitsuwa, vanhu vakashandisa zvakanyanya izvo zvavaigona kuisa maoko avo uye izvi zvaisanganisira mushonga. Yakakomborerwa nehupfumi hwakawanda, mishonga yemakwenzi iyo iwe yaunogona kuona pachiratidziro, yaishandiswa kurapa mhando dzese dzezvirwere. Kubva pane tisanes yemazhinji malaises uye aches, inotonhorera balms yekutsva, kune tonics kana 'rafresisan' yakagadzirirwa kubva kumashizha nemidzi yezvirimwa, mazhinji emishonga iyi achiri kushandiswa nhasi uye ave achiratidzwa nesainzi kuti anobatsira kune hutano hweumwe munhu. Unogona kunyange kuona zvimwe zvezvirimwa izvi paunenge uchiongorora dzimwe dzezvitsuwa nzira dzakawanda dzehunhu.
Tsika dzeCreole dziri kuputika nehunyanzvi uye hwakasimba hunyanzvi - kubva kumimhanzi nekutamba kusvika mukunyorwa nemhizha. Kutanga kwehunyanzvi hwevanhu vemuSeychellois kunoratidzwa kuburikidza nezvigadzirwa zvakadai sezvivezwa uye zviridzwa zvechivanhu zvinosanganisira madhiramu emoutia nezvimwe zviridzwa zvakagadzirwa muSeychelles. Iwe unogona zvakare kuwana mifananidzo uye humwe hunyanzvi, hwakawanda hwayo, senge rafia mabhegi neheti, zvazove zvakakurumbira zviyeuchidzo.
Yetsika yeSychellois fashoni yezviitiko zvakasiyana uye zvakajairwa zvebvudzi zvakapfekedzwa nevakadzi panguva iyoyo zvinogona kuratidzwa zvichiratidzwa mune imwe yemamuseum. Iwe unogona kana kutsvaga mimwe yemitambo yechinyakare, mimwe yacho yakapfuudzwa pasi ndokuramba uri mupenyu munharaunda yanhasi. Paunenge uchiongorora zvimwe zvezvigadzirwa izvi unozoona mashandiro akaita kuvepo kwevaAfrica, veAsia neveEuropean tsika yeCreole.
Kuchengetedza Seychelles nhoroondo
Iko hakuna imwe nzira iri nani yekurangarira rwendo rwako kuburikidza nedzimba dzezvakaitika pane kutora kumba diki chiyeuchidzo. Mushure mekushanya kwako kumira neyechitoro chemyuziyamu yezvipo iyo inobata yakatarwa yezvipo zvevanhu veese mazera. Kune vechidiki vanhonga echinyakare mamvemve chidhori kana bhuku rechinyakare renguva dzekurara ivo pavanenge vachikwira kuenda kurota. Unogona kuwana hunyanzvi hwemuno kubva pamabhegi kusvika kuzvigadzirwa zvemuti uye iwe unogona kutora kumba mudiki marmit! Iwe une chokwadi chekuzvitsvagira chimwe chinhu iwe nevako vese vaunoda!